शदियौंदेखि राज्यविहीनताको अवस्थामा आन्तरिक औपनिवेशिक पीडा भोगी रहेको मधेशले आन्दोलनको माध्यमबाट राज्यलाई दिएको चुनौतीलाई १२ वर्ष बिति सकेको छ । आन्दोलनमार्फत पहिलो पल्ट उजागर राज्य र मधेशबीचको अन्तर्विरोध सतहमा स्पष्ट देखियो । मधेश आन्दोलनले अन्तर्विरोधको चर्को रुप मात्र देखाएन, दुई राष्ट्रियतासंग पनि साक्षातकार गरायो । दुई फरक संस्कृतिबीचको संघर्षले मधेशको हक अधिकारलाई सार्वजनिक गर्दा राज्यका लागि यो पूरा गर्न नसकिने अडानले स्पष्ट सीमारेखा कोरि दिएको छ । दुई पक्षीय अडानका कारण मधेश आन्दोलन टुँगोमा पुग्न सकेन । प्रादेशिक सरकारले यसलाई आवरणभित्र छोपि राखेपनि यसको प्रभाव प्रादेशिक सरकारमा सन्निहित रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।मधेशलाई आफ्नो हक अधिकारको पहिचान गर्न शदियौं लाग्यो । गुलामी, दासताको धरातलबाट राज्यविरुद्ध उठेको आन्दोलनले सेन्टिमेन्टको आधारमा समग्र मधेशलाई एकताबद्ध बनाएपनि संगठनात्मक सशक्तता ल्याउन सकेन । समग्र मधेश एक प्रदेशको नारा त ल्यायो तर यसको मर्मलाई बुझ्न सकेन । समग्र मधेशको साझा विचारधारा त ल्यायो तर संस्थागत गर्न सकेन । अवसरविहीन समाजबाट आएका नेताहरु पहिला आफ्नो लागि अवसर खोज्दै राज्यको प्रलोभनमा फँसेर विखण्डित हुँदै गए । फलतः मधेशको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विचारधारा धन आर्जनको माध्यममा सिमित हुन पुग्यो । राज्यको प्रलोभनमा परेर पार्टीहरु विभाजित हुँदै गए । अनेक पार्टी अस्तित्वमा आए । पार्टी विभाजन कमाईको माध्यम बन्यो । पार्टी नेतृत्वको यही कमजोरीमाथि प्रहार गर्दै राज्य मधेश आन्दोलनको सशक्ततालाई निस्तेज पार्दै गयो । मधेशको राजनीतिक पार्टीमा देखिएको विचलनबाट राज्यशक्तिले पार्टीहरुलाई कमजोर त बनायो नै मधेशमा पार्टीहरुलाई अलोकप्रिय बनाउँदै एकतामाथि प्रहार गर्दै गयो । जातीय पार्टीमा विभाजित गरि मधेशमा राजनीतिक अराजकता फैलाईयो । जातीय विद्वेष यति मात्रामा फैलाईयो कि मधेशका राजनीतिक पार्टीहरु पारस्परिक लडाईमा सीमित भई आन्दोलनको मुख्य धारलाई नै बिस्र्यो । आफ्नै धरातलबाट उपेक्षित बनाएर गैर मधेशी पार्टीहरु मधेशमा प्रभाव जमाउन सफल भयो । २०७० को दोश्रो संविधान सभा चुनावले यही परिणाम देखायो ।मधेशका राजनीतिक पार्टीहरु पारस्परिक रुपमा लडि रहँदा राज्यले आफ्नो मनोनुकूल संविधान बनाउन राम्रो अवसर पायो र संविधान घोषणा भयो । मधेशको उपेक्षा गरि संविधान घोषणा विरुद्ध मधेशको आवाज बुलन्द भयो । सबै पार्टीहरुबीच सहकार्यको वातावरण बन्यो र राज्य विरुद्ध आन्दोलन शुरु भयो । लामो समयको आन्दोलनलाई तत्कालीन ओली सरकारले बेवास्ता गरेकाले मधेशका दलहरु नाकाबन्दी आन्दोलन शुरु गरेर सरकारमाथि दबाव बढायो । सरकार संविधान कार्यान्वयनको दिशामा आक्रामक बनेकोले मधेशलाई पेलेर जाने रणनीति बनायो र मधेशका ६३ जना वीर सपूत शहीद भए । दमनात्मक अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिग्रिने डरले सरकार प्रलोभनको जाल बिछायो । यो फन्दामा परेर उत्कर्षमा रहेको नाकाबन्दी आन्दोलन बिना शर्त टुँगियो । नाकाबन्दी आन्दोलनको विसर्जन मधेशको ठूलो हार थियो । पराजित मानसिकताले मधेशलाई जरैदेखि हल्लाई दियो । नाकाबन्दीको असफलताले मधेश प्रतिरक्षात्मक पंक्तिमा धकेलियो ।मधेशसंग प्रत्यक्ष र चर्को अन्तर्विरोध रहेका कारण राज्य मधेशले माँग गरेको समग्र मधेश वा दुई प्रदेश दिने पक्षमा थिएन । संघीयता दिने तर मधेशलाई टुक्रा टुक्रा पारि निस्तेज गर्ने राज्यको तीक्ष्ण रणनीति अन्तर्गत अन्तमा ७ प्रदेशको संघीय संरचना बन्यो । यसलाई नै मान्यता दिलाउन र निर्धारित चुनावलाई सम्पन्न गराउने रणनीति राज्य बनाउँदै थियो । यही बेला मधेशका विभाजित ६ वटा पार्टी (तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, तराई मधेश सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (गणतान्त्रिक) एकीकरण भई राष्ट्रिय जनता पार्टी बन्यो । मधेशको लागि यो राम्रो सन्देश थियो । मधेशलाई नेतृत्व गर्ने अब दुईवटा पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी थियो ।नाकाबन्दीबाट मधेशलाई अलग पारेपछि संविधानको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती थियो । असन्तुष्ट मधेश राज्यलाई चुनौती दिन आमने सामने खडा रहेको अवस्थामा निर्धारित समयमा तीन तहको चुनाव हुन कठीन देखिएको थियो । दुवै पार्टी प्रचण्डले थमाई दिएको संशोधनको झण्डा उचाली आन्दोलन गरि रहेको अवस्थामा राज्य उनलाई आफ्नो प्रभावमा लिन अनेक उपाय अवलम्बन गरि रहेका थिए । यसैबेला बडो चमत्कारीक ढंगले संघीय समाजवादी फोरम बिना शर्त चुनावी मैदानमा उत्रियो । अब संघर्ष राजपाको काँधमा थियो । राजपालाई पनि चुनावमा उतार्न राज्य अनेक तिकडम लगाएर अन्ततोगत्वा बिना शर्त पठायो नै । संविधान कार्यान्वयनका लागि संसफो र राजपालाई चुनावमा पठाउने राज्यले गरेको यो चमत्कारबाट दुबै पार्टी धन्य भए । मधेश आन्दोलनको क्रम भंग भयो । संविधानको विरोध गर्ने दुबै पार्टी कालो दिवसलाई सेतो बनाएर बैधानिकता दिलाए । विचार विलीन भयो, पार्टी भने कायम रह्यो । मधेशको समग्रता ८ जिल्लामा सीमित भयो । पश्चिम मधेशलाई चुनाव बहिष्कार गराएर पूर्वको चुनावमा भाग लिएका कारण पूर्वका मधेशी नेताले हामीलाई धोखा दिएको लाँछना लगाई आफूलाई उनीहरु प्रदेश नं. ५ मा एडजस्ट गर्दैछन् । मधेशको समग्रता त्यसै पनि तहसनहस भयो ।विद्वतवर्गको वृतमा आन्दोलनको क्रम भंगबारे दुबै पार्टीको आलोचना भएपनि अवसरको खोजीमा रहेका आफ्नो आफ्नो स्तरमा अवसरको उपयोग गर्न कार्यकर्ताहरुले पार्टीको वैचारिक विचलनलाई ध्यानै दिएन । अवसर प्राप्त गर्न कार्यकर्ताहरु चुनावमा होमिएकोले पार्टी कार्यकर्ताद्वारा पार्टीहरु आलोचित भएन । अवसर पाउने आशमा पार्टीका कार्यकर्ताहरु चुनावमा होमिएर दुबै पार्टीलाई सम्मानित अवस्थामा उभ्याउन सफल भए । तीनै तहमा अवसर पाएर सन्तुष्ट भएका अवसरहीन जमातले महत्वाकाँक्षा पूरा गर्न दुबै पार्टीलाई जुन ढंगले स्थापित गरे, जनताको आकाँक्षा पूरा गर्न असक्षम रहेको अवस्थामा पार्टीको साख त्यसैपनि धूल धुरसित हुने कुरामा कुनै शंका छैन । पार्टीहरु पनि यथास्थिति मै रमाउने बानी बसाली सकेको छ । संविधानलाई स्वीकार गरि चुनावमा होमिएपछि पुनश्च आन्दोलन गर्नेको औचित्य नै छैन । आन्दोलनको एजेण्डा पनि छैन । संविधान संशोधन नगरे आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा आफ्ना कार्यकर्तालाई सन्तुष्ट गर्नेबाहेक अरु केही पनि होईन ।संघीय सरकारका साथै ६ वटै प्रदेशमा सरकारको दुईतिहाई रहेको अवस्थामा कलंकको रुपमा रहेको प्रदेश नं. २ संघीय सरकारको आँखाको कसिंगर बनेको छ । हालै जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमणको बेला संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीको हिन्दीमा सम्बोधन, झण्डाको आकार बिगारेको, संविधान मानेर त्यही अन्तर्गत बनेका संघीय सरकारलाई समर्थन दिएर विदेशी पाहुनालाई संविधान विभेदपूर्ण छ भन्ने आदि आरोप लगाएर प्रदेश नं. २ प्रति संघीय सरकारको बक्रदृष्टि यसै पनि प्रष्ट देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि सीधै जनकपुर अवतरण संघीय सरकारको लागि अपाच्य कुरो थियो । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली यो जहर पिएर भारतसंग सम्बन्ध बनाउन बाध्य थिए । सशक्त र स्थाई सरकारको उन्माद बोकेका ओली सरकार भारतको समर्थन बिना एक पाइला चल्न नसक्ने अवस्थालाई विचार गरि उनले सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका हुन् ।हालै अमेरिकाको मधेशी संस्थाबाट आमन्त्रित प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीलाई अनेक आरोप लगाई अमेरिका जानबाट रोक लगाएको कुराले पनि पुष्टि गर्दछ कि प्रदेश नं. २ संग संघीय सरकार पूर्वाग्रही बनेको छ । असन्तुष्टताको धरातलमा जेजति कारणले सशक्त सरकारको रुपमा उदाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार समक्ष अनेक चुनौतीहरु छन् । अवरोधका कारक तत्वहरुसंग सम्बन्धको सन्तुलन कायम भएन भने एकलौटी बहुमतको सरकार पनि यहाँ चल्न नसकेको नजिर जस्तै यो सरकार पनि धाराशायी हुनेमा कुनै शंका छैन । ओली सरकार यहाँसम्म पुग्न जुन रणकौशल देखाएको छ, भविष्यमा पनि कायम रह्ने संकेत भने देखि रहेको छैन ।भिन्न भिन्न दिशामा रहेका अवरोधक तत्व, सरकारको असन्तुलन व्यवहारमा एकीकृत भई सरकारको विरुद्ध आउने सम्भावना पनि छ । प्रदेश नं. २ संगको सौतेनी व्यवहार संघीय सरकारले अविलम्ब हटाउनु पर्दछ । प्रदेश नं.२ को सरकारलाई अपदस्थ गरि राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने संघीय सरकारको नियतलाई विभिन्न पत्र पत्रिका, अनलाईनले लेखि सकेको छ । प्रदेश नं.२ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक नम्बरमा रहेकोले आफ्नो श्रेष्ठताको प्रदर्शन गर्न ओली पछाडि हट्दैन भन्ने राजनीतिक वृतमा चर्चा पनि छ । भारतसंग सम्बन्ध सुधार्न नचाहेका अन्धराष्ट्रवादीहरु ओलीलाई उचालेर २ नं. प्रदेशलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । यदि यसो भयो भने ओली सरकारको पतन हुनेमा कसैले रोक्न सक्दैन ।शक्ति प्राप्त गर्नु र त्यसको प्रदर्शन गरि कुशलता हासिल गर्नु हरेक शासकको रणनीति हो । शक्तिको उन्माद कसैले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । उन्मादित अवस्थामा कुशल व्यवहारको अपेक्षा गर्नु बेकार हो । यहींबाट पतनोन्मुख प्रक्रिया शुरु हुन्छ । मधेशसंग संघीय सरकारको आक्रामक सम्बन्ध देशमा ठूलो आन्दोलनको कारण नबनोस्, ओली सरकारको लागि सोच्नु पर्ने ठूलो विषय हो । चुनावभन्दापूर्व धेरै जन आधार भएका मधेशीहरुले आत्मसमर्पण गरेबाट मधेशले पनि आत्मसमर्पण गर्नै पर्दछ भन्ने सोचले ओलीलाई प्रेरित गरि रहेको छ भने यो सोचलाई अविलम्ब त्याग्नु पर्दछ । कल्याण हुन्छ ।